Umonakalo ka-R40m beshisa izitimela | Isolezwe
Umonakalo ka-R40m beshisa izitimela
Isolezwe / 1 February 2013, 09:26am / NQOBIZIZWE ZWANE
31/01/13 DURBAN: ABAGIBELI bezitimela baseMlazi esiteshini sakwaMnyandu abebethukuthele begane unwaba bashise isitimela sakwaMetrorail bajikijela namatshe kumaplatform esitimela ngenxa yokuthi izitimela zihlala zisalele emuva ngesikhathi
ABAGIBELI bezitimela eMlazi bavuke umbhejazane bashisa izitimela ezimbili kule ndawo bekhala ngokungasigcini kwazo isikhathi osekwenzeke isikhathi esevile ezinyangeni ezimbili.
Okhulumela iMetrorail, uNkk Thandi Mkhize, uthe umonakalo wokushiswa kwalezi zitimela ulinganiselwa ku-R40 million kanti kuzothatha isikhathi esingangezinyanga eziyisithupha ukuthi zilungiswe.
“Izitimela ebezihambela eMlazi bezivele zishoda, kuzoba nzima kakhulu manje. Okwamanje asikho isitimela esizofika eMlazi, zizojika e-Reunion bese bexhuma ngamabhasi. Yiqiniso amabhasi ngeke amelane nabantu abangu-160 000, sicela bebekezele,” kusho uNkk Mthembu.
Uthe ngabanamathikithi enyanga nawezimpelasonto abazobhekelwa kakhulu ngamabhasi.
“Abantu bangesabi ukubuza uma bethenga amathikithi ngokuqhubekayo,” kusho uNkk Mthembu.
Lezi zindimbane zabagibeli ebezingaphezulu kuka-1 000 zivuke indlobane zashisa izitimela esiteshini KwaMnyandu, izolo, ekuseni ziveza ukuthi sezikhathele wukufika emsebenzini nasezikoleni sekudlule isikhathi.
Zikhale nangokudukiswa nguMnuz Langalakhe Zwane omemezela ukuhamba kwezitimela emisakazweni ehlukene abathi ukhipha imininingwane yezitimela eshayisanayo.
“Ulimi oluzwakalayo kuleli zwe wumbhikisho. Kunini sifika emisebenzini sekudlule isikhathi, kwesinye isikhathi sibuye emakhaya sekuyosa ngenxa yokusebenza komzila owodwa.
“Inezinyanga le nto iqhubeka kodwa asiboni mzamo wokuyilungisa futhi akekho ositshelayo ukuthi kwenzekani. Njengoba lezi zitimela sezivutha amalangabi nakanjani bazosukuma ngoba abatshengisi ukusicabangela ekubeni sigibela ngemali lapha,” kubhoka ngolaka uMnuz Issa Majola ohlala eSeventini.
Eqhubeka ubalule ukuthi njengoba kunenkinga yomzila, iMetrorail ayikaze ikhiphe amabhasi ukuthi abathuthe incamela ukubafikisa ngo-2 ezintathakusa emakhaya.
“Siyaqala ngqa ukunikezwa amabhasi selokhu zaqala ukubheda izitimela. Besihamba sima indlela yonke, uma ulalela uZwane emsakazweni akutshele ukuthi isitimela sisemuva ngamaminithi ambalwa, ufike uhlale ihora lonke singaqhamuki. Iyabheda iMetrorail ifuna imali, abantu abanamathikithi enyanga bazoshonaphi ngoba ngeke amabhasi amelane nabantu abangaka?” kubuza uMajola.
Umfundi kaGrade 12, eClairwood Secondary, uSiyanda Ndimande (19), elandisa leli phephandaba ngomsusa wokushiswa kwalezi zitimela uthe ushikishi lusuke ngesikhathi kuma isitimela sesibili KwaMnyandu ngabo-6 ekuseni sifica esinye ebesijemile naso.
“Ngesikhathi isitimela sesibili naso sima abantu bavele badinwa ngale ndlela engachazeki bekhala ngokuthi bazofika sekudlule isikhathi emsebenzini.
“Baqale lapho ukuhlephula iminyango yesitimela bebulala namawindi bengasabambeki. Emva kwalokho ngibone sekushuqa intuthu ekhanda lesitimela, nokuyilapho beqale khona ukusishisa emva kokukhishwa komshayeli.
“Ngenxa yovalo nami ngiphumile ngoba bengingazi ukuthi sizoqhuma noma kuzokwenzekani njengoba kunogesi,” kusho lo mfundi.
Eqhubeka uveze ukuthi akazi ukuthi uzoya kanjani esikoleni ngenxa yale nkinga.
“Namuhla (izolo) ngeke ngisaya futhi kusasa (namuhla) angazi noma zizobe zikhona yini noma cha. Uma amabhasi engaphumi angazi ngizokwenze njani,” kusho uNdimande.
Lokhu kushiswa kwezitimela kuholele ekutheni inqwaba yabafundi nabasebenzi ingalubhadi ezikoleni nasemisebenzini.
Kushube isimo ngesikhathi iMetrorail ibahlinzekela ngamabhasi njengoba bevele bawajikijela ngamatshe bavala nomgwaqo uMangosuthu Highway ngezinguzunga zamatshe.
Emva kwalokho bebeshaya kwasani okuyimoto ebihamba kulo mgwaqo, kubandakanya ezezicishamlilo, ezezakhamizi namatekisi kwaze kwalamula amaphoyisa ngokudubula ngezinhlamvu zenjoloba nesisi esikhalisa unyembezi.
Amaphoyisa ashaqe abantu abangaphezu kwabayisihlanu ngodweshu.